अमेरिकी राष्ट्रपति चढ्ने विमान किन यति महंगो? - प्रविधि - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अमेरिकी राष्ट्रपति चढ्ने विमान किन यति महंगो?
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै ट्वीटरमार्फत भविष्यका राष्ट्रपतिका लागि किन्न लागिएको ‘एयर फोर्स वान’ विमान असाध्यै महंगो भएकोले अर्डर बदर गर्नुपर्ने बताए। ट्रम्पले यसको लागत करिब ४ अर्ब डलर हुने अनुमान गरेका छन्। एयर फोर्स वान किन यति महंगो हुन्छ त?
‘प्रेसिडेन्सियल एयरक्राफ्ट रिक्यापिटलाइजेसन’ कार्यक्रमका अनुसार एयर फोर्स वानको अंकित मूल्य २.९ अर्ब डलर राखिएको छ। जबकि एक बोइङ ७४७–८ को मूल्य मात्र ३५ करोड पर्न जान्छ। त्यसैले पनि मानिसहरु एयर फोर्स वानको मूल्य सुनेर चकित भएका हुन्।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एयर फोर्स वान मात्र बोइङ ७४७–८ होइन। अमेरिकी सरकारले बोइङसँग गरेको सम्झौताअनुसार १७ करोड डलरका दरले दुई ७४७–८ किनेर त्यसलाई मोडिफाइ गर्न दिइनेछ। एउटा विमान मर्मतमा भएको बेला पनि अर्को उड्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन दुई ओटा एयर फोर्स वानको आवश्यकता पर्दछ। राष्ट्रपतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सैन्य तथा प्राविधिक सुविधासम्पन्न भएपछि सो विमानको मूल्य २.९ अर्ब डलर पुग्ने हो। यसलाई त्यसै ‘उडिरहेको ह्वाइट हाउस’ वा ‘उडिरहेको ओभल अफिस’ पनि भनिएको होइन। एयर फोर्स वानको नयाँ सँस्करण सन् २०२३ पछि मात्रै उपलब्ध हुनेछ।
हाल बाराक ओबामाले प्रयोग गरिरहेको एयर फोर्स वान बोइङ ७४७–२०० को मोडिफाइड भर्सन हो। यो ७०.६ मिटर लामो छ र यसको पखेटाको फैलावट ५९.६ मिटर रहेको छ। यस विमानभित्र ४ सय वर्ग मिटर स्थान उपलब्ध छ, जसमा एक कन्फेरेन्स रुम, एक डाइनिङ रुम, राष्ट्रपतिका लागि एक निजी क्वार्टर, सिनियर स्टाफ अफिसरहरुका लागि कार्यालय, एक पटकमा १३ जनासम्म पत्रकार अट्ने प्रेस क्षेत्र, प्रत्येक उडानमा एक जना डाक्टर रहने मेडिकल रुम, जिम, १ सय जनासम्मलाई खाना पस्किन सक्ने दुई ओटा भान्सा र उच्च स्तरीय सञ्चार व्यवस्था रहेको छ।
एयर फोर्स वानको कार्यकक्षमा ओबामा
हालको एयरफोर्स वानलाई विस्थापित गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले बोइङसँग सम्झौता गरेको विमान अझ ठूलो र सुविधासम्पन्न हुनेछ। नयाँ एयरफोर्स वानको सबै प्रविधि हालको भन्दा अपग्रेडेड हुनेछ। ह्वाइट हाउसका अनुसार ‘अमेरिका आक्रमणमा परेको बेलाको मोबाइल कमान्ड सेन्टर’ हो एयरफोर्स वान। त्यसैले यो सैन्य सुविधासम्पन्न हुनै पर्छ। जसका लागि सोहीअनुसारको विद्युतीय प्रणाली र दोहोरो ब्याकअप प्रणाली पनि हुनुपर्छ। यसको अर्थ एयर फोर्स वान इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पल्सबाट समेत सुरक्षित हुनेगर्छ। यो एकै उडानमा वाशिंगटनबाट हङकङ पुग्न सक्छ र उड्दाउड्दै इन्धन भर्न पनि सक्छ।
यी सबै प्रविधि अत्यन्त महंगो हुने गर्छ। त्यसैले बोइङ किन्नभन्दा पनि त्यसलाई राष्ट्रपतिको स्तरमा मोडिफाई गर्न कैयौँ गुणा बढी रकम खर्च हुन्छ।
यही खर्च देखेर ट्रम्पले एयरफोर्सको अर्डर बदर गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ट्रम्प आफैँ भने बोइङ ७५७–२०० चढ्छन्, यद्यपि यो एयरफोर्स वानभन्दा हरेक हिसाबले सानो छ, जसको लम्बाई ४७ मिटर र पखेटाको फैलावट ४० मिटर रहेको छ।
एयर फोर्स वानको खर्च यतिमा मात्र सीमित छैन। एयर फोर्स वानको सञ्चालनमा प्रतिघण्टा अनुमानित २ लाख डलर खर्च हुनेगर्छ।
ट्रम्पको निजी बोइङ
तथापि यी सुविधा र विशेषताहरुलाई मध्यनजर गर्दा दुई ओटा एयरफोर्स वानको मूल्य ४ अर्ब डलर हाराहारी पुग्नु उचित नै भएको विज्ञहरु मान्छन्। एजेन्सी
प्रकाशित २३ मंसिर २०७३, बिहिबार | 2016-12-08 16:30:07